Weerar ku bilawday Qaraxyo iyo Rasaas oo ay dabley hubeysan ku qabsadeyn Isbitaalka Millateriga ee… - Caasimada Online
Home Dunida Weerar ku bilawday Qaraxyo iyo Rasaas oo ay dabley hubeysan ku qabsadeyn...
Weerar ku bilawday Qaraxyo iyo Rasaas oo ay dabley hubeysan ku qabsadeyn Isbitaalka Millateriga ee…
Kabul (Caasimadda Online) – TV-ga Al-jazeera ayaa hadda baahiyey inay ciidamo hubeysan ay weerar ku bilawday qaraxyo iyo rasaas xooggan ku qabsadeyn Isbitaalka Sardar Daud Khan oo ay leeyihiin ciidamada Militariga Afgaanistaan.
Isbitaalkaan ayaa ku yaal magaalada Kabul ee dalka Afghanistan waxaana arrintaas xaqiijiyey Wasiirka Gaashaandhiga dalka Afghanistan oo la hadlay Al-Jazeera.
Qarax xooggaan ayaa lala beegsaday albaabka isbitaalka kadibna waxaa gudaha isbitaalka galay dableydii hubeysneyd waxaana hadda gudaha isbitaalka laga maqlayaa rasaas xooggan oo ay is dhaafsanayaan ciidamada Dowladda iyo kooxihii weerarka soo qaaday.
Wasiirka Gaashaandhigga Afgaanistaan ayaa ka dhawaajiyey inay ciidamadooda ka fiirsan doonaan weerarka ka socdo Ibsitaalka si looga feejignaado inay badato waxyeelada soo gaari karto dhaawacyada yaal isbitaalka iyo sidoo kale ciidamada Dowladda.
Meesha uu ku yaal isbitaalka la weeraray ayaa la sheegay inay ku yaalaan xarumo ay dowladda leedahaya iyo safaarado ay leeyihiin dowlado shisheeye waxayna aheyd goob aad loo ilaaliyo.
Weerarkaan lagu qaaday isbitaalka ayaa imaanayo kadib markii asbuuc ka hor weerar khasaaro badan geystay oo lagu qaaday saldhig ay ciidamada Militariga ku leeyihiin isla magaalada Kabul waxaana weerarkaas sheegatay ururka Taliban ee halkaas ka dagaalamo.
Ilaa hadda lama ogaan khasaaraha rasmiga ah ee ilaa hadda ka dhashay weerarkaas balse wixii warar ah ee kuso kordha waan idinla soo socod siin doonaa maadaama ay weli socoto rasaas xoogga.